Hargeysa(Mandheeranews)-Wargeyska Geeska Afrika ayaa waraysi la yeeshay danjirihii hore ee Maraykanka u fadhiyi jiray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya danjire David Shinn oo khabiir ku ah arrimaha gobalka Geeska Afrika.
Waxaynu fahansanahay ficiltanka u dhaxeeya Maraykanka iyo China, China hadda wuxuu isku dayi karaa arrimo ka dhan ah Somaliland. Ma filaysaa in Maraykanka amaba dalalka kale ee reer galbeedku ay taageeri doonaan Somaliland haddii uu China ku soo qaado dagaal diblomaasiyadeed?
Shiinuhu diblomaasiyad ahaan wuu ka soo hor jeedsan doonaa dedaal ay Taiwan iskugu daydo inay la yeelato Somaliland xidhiidh diblomaasiyadeed oo rasmi ah (formal diplomatic relations). Balse sida aan sare ku xusay, shan iyo toban dal ayaa Taiwan la leh xidhiidh diblomaasiyadeed, halka kuwo kale oo badani ay la leeyihiin xafiisyo ganacsi (trade offices). Dalal yar oo ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Koonfur Afrika ayaa ku leh Taiwan xafiisyo isku xidh (liaison offices). Shaki ayaan ka qabaa in Shiinuhu wax badan ka samaynayo arinta Somaliland, inkasta oo ay u badan tahay in Hargeysa laga saari doono in wax tixigelin ah laga siiyo deeqaha debedda ee Beijing.
Dawladda Soomaaliya oo ay taageeraan reer galbeedku hadda waxay taageeraysaa China. Waxa ay dawladda Muqdisho u ogolaatay shirkadaha China inay ka kalluumaysan karaan biyaha Soomaaliya. Geesta kale haddii aynu eegno, dawladda Maraykanku waxay taageere weyn u tahay Soomaaliya. Dhammaan mashaariicda USAD waxa la geeyaa Muqdisho, iyadoo la iska indho tiray in la caawiyo shacabka reer Somaliland. Ma u malaynaysaa in Maraykanku dib u eegis ku samayn doono
Waxa aan u haystaa in USAID ay xooga caawimo ah siiso Somaliland, inkasta oo inta badan caawimada Maraykanku ay tagto Somaliya. Si kasta ha noqotee, ma aaminsani in xidhiidhka ay Taiwan la yeelatay Somaliland uu wax raad ah ku yeelan doono sida ay u socoto deeqda dawladda Maraykanku ay siiso Geeska Afrika.
Aqalka cad ee Maraykanku wuxuu taageeray xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan u bilaabmay. Maxaad ku macnayn kartaa?
Ma jirto wax badan oo aan ka qaadan karo qoraal barta Twitter ka lagu qoray oo aan cidda qortay magaceedu la socon (An anonymous tweet) oo ka soo baxday Golaha Amniga Qaranka. Waxa laga yaabaa inaanay jiri doonin wax kale oo intaas ka badan oo ay arinkan ka tidhaahdo dawladda Maraykanku, balse maamulkani [Maamulka Trump] waa mid arimo yaab lehi ka soo baxaan (full of surprises) oo waan qaldanaan karaa.